समृद्धिको यात्रामा बामदेव गौतमको खाँचो भएकाले मैले बाटो खोलिदिएको हुँः रामवीर मानन्धर - TV Annapurna
समृद्धिको यात्रामा बामदेव गौतमको खाँचो भएकाले मैले बाटो खोलिदिएको हुँः रामवीर मानन्धर
October 10, 2018 October 16, 2018 Annapurna TV
जनताले प्रचण्ड बहुमतले जिताएको सांसदलाई एकाएक राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
-हो सबैभन्दा पहिला यो विषयलाई सकारात्मक रुपमा बुझिदिन मेरा शुभचिन्तक एवं कार्यकर्तालाई सुझाव दिन्छु । म पार्टीको ईमान्दार सिपाही भएकाले पार्टीको निर्देशन पालना गरे ।
तपाईको राजीनामाको बिषयपछि चर्चामा धेरै कुरा आएका छन के हो खास ?
-मैले यो सबै कुरा तत्काल भनिहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन धेरै कुरा आफैं स्पष्ट भईसकेका छन बाँकी कुरा खुल्दै जानेछन । तर यो भन्नैपर्छ मैले अब हामी समृद्धिको यात्रामा छौ । यसका लागी एउटा टिम चाहिन्छ त्यही खालको स्प्रिट चाहिन्छ । यसका लागी मैले थप सहयोग गर्नुपर्ने आवस्यकताले भएको हो । यसभन्दा अरु अर्थमा बुझ्नुपर्ने आवस्यकता देख्दिन ।
तपाईले बामदेव कामरेडलाई स्पेस खाली गरिदिएपछि तपाईको व्यस्थापन अब कसरी हुन्छ ?
-मेरो व्यवस्थापनको विषय अरु कसैको चिन्ताको विषय बन्नुपर्ने मलाई लाग्दैन । म सँगै राजनीतिमा होमिएका धेरै साथीहरु अहिलेसम्म वडाध्यक्ष सम्म बन्ने मौका मिलेको छैन । म सांसद बने संविधान सभाको सदस्य बनेर ऐतिहासिक संविधान बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुने मौका पाए । अहिले पार्टीमा अर्को साथीलाई मौका दिने सवालमा मलाई व्यवस्थापन गर्ने बिषय प्राथामिक हुन सक्दैन ।
पार्टीको निर्देशन मान्ने सवालमा क्षेत्र नम्बर ७ का जनताले तपाईको बिश्वासमा गरेको मतदानको अवमुल्यान भएझै लाग्दैन ?
-एकदमै ठिक हो । जनताले मलाई बिश्वास गरेर जिताएका हुन । यो क्षेत्रलाई नै समृद्ध बनाउछ र विकास गर्छ भन्ने अपेक्षाले उहाँहरुले मतदान गर्नुभयो । उहाँहरुले मलाई मतदान गरेर जिम्मेवारी दिनुको अर्थ यो क्षेत्रको विकास गर्नु हो । देशलाई समृद्ध बनाउनु हो । म निक्कै गम्भीर छु यो विषयमा । तर मलाई यो पनि थाहा छ यो म एउटा व्यक्तिले गर्ने होईन टिमले गर्ने हो । काम हुन टिक वर्क चाहिन्छ । मैले तपाईलाई सोधे भने विकास भएको छैन भन्नुहुन्छ । त्यसको उदेश्य के हो त ? लक्ष्य के थियो त ? भन्दा विकास निर्माण थियो । किन चाहिं अड्किएको छ भन्दा टिम वर्क प्रभावकारी नभएर । यसैका लागी मैले यो त्याग गर्न तयार भएको छु् । यसलाई सबै क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ ।
किन हुन सकेन ? तपाइकै पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत छ । मन्त्री प्रधानमन्त्री तपाईकै पार्टीका फेरि ?
-हो यसलाई अझै मजवुत बनाउने बामदेव कमरेडको खाँचो पार्टीले महशुस गरेकाले नै मैले राजीनामा दिएर उहाँका लागी बाटो खोलेको हुँ । म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु उहाँको उपस्थितीले सरकारले अपेक्षा गरेजति काम गर्न सक्नेछ । उदारहणका रुपमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ भारतमा अग्रेजलाई हटाउन एक्लै महात्मा गान्धि हुँदा पुग्यो । मलेशियामा महाथीरलाई हेर्न सकिन्छ । नेपालमै हेर्नुहोस कुलमान घिसिङ ।
के बामदेवजी आउदाँ संसदमा जादुकै छडी चल्छ ? उहाँ पनि धेरैपटक टेस्टेड होईन र भन्या ?
जादुकै छडी उहाँ आउदाँसाथ चल्ने भनेको होईन तर मैले टिम वर्कमा कतै न कतै ल्याक भईरहेको, खड्की रहेको छ भनिरहेको छु नी त । त्यही अभावलाई पुरा गर्ने बिश्वास मैले लिएको छु र हुन्छ पनि । फेरि स्पष्ट पार्न आवस्याक ठाने सबैको क्षमता एउटै हुदैन । मैले जहिले पनि कुलमान घिसिङको उदारहण दिन्छु , के वहाले एक्लै गर्नु भएको हो र त्यो सबै ? होईन नी टिम वर्कले गरेको हो त्यसका लागी टिम सवल बनाउने बामदेवको कमरेडको खाँचो महशुस भयो ।
मानन्धरसँगको पुरै कुराकानी हेर्न तलको लिंङ्क क्लिक गर्नुहोस
अन्तर्वार्ता, भिडियो, समाचार
घर छैन, कहाँ मान्ने दशैँ ?
रसियामा काम लगाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने ३ जना पक्राउ